3 astaamood oo cusub oo Android 12 ah oo hagaajin doona naqshadeynta iyo khibrada | Androidsis
Maalmahan tan iyo hordhaca ayaa la sii daayay loogu talagalay horumarinta 12, Waxaan ognahay 3 sheeko oo cusub oo dad badani hubaal jeclaan doonaan; in kasta oo ay tahay in la sheego in qayb wanaagsan oo iyaga ka mid ahi ay haddaba ku jiraan lakabyo kale oo shakhsi ahaaneed sida kuwa Samsung.
Un Android 12 oo aan ka faalloonnay qaar ka mid ah riwaayadaha cusub maalmahan ka hor, waa sidee qaabkani cusub hal gacan, iyo taas saddexda war ee maanta aan hayno, waxa ku saabsan cusbooneysiintan cusub ee cusub waxay umuuqataa inay soo hagaageyso. U tag.
1 Tifatiraha shaashadda ayaa ku hagaagaya Android 12
2 Shaashad quful cusub iyo ogeysiisyo
3 Ugu dambayntii Android: hoos ugu tilmaam farriimaha shaashad kasta
Tifatiraha shaashadda ayaa ku hagaagaya Android 12
On Samsung ee One UI waxaan haynaa qalab awood badan oo aan ku qaban karno shaashada sida awooda in hoos loo dhaqaajiyo dalagga si ay u wada qabsadaan shaashadaha oo dhan ama xitaa awoodda xulashada dhammaan qeybaha si dhaqso leh loo goosto.
Nooca cusub, Android 12 waxay uruurisaa laba waxyaalood oo muhiim ah sida badhanka dalagga iyo suurtagalnimada in lagu daro istiikarada iyo qoraalka. Waxay kaloo soo bandhigaysaa a qalab tirtiraha, halka badhanka gadaal ama hore ee ficilada la fuliyay, u gudub xagga sare si isdhexgalka uu u qaato kor u kac kale iyo caan.
Maaha inay tahay wax cusub, laakiin wanaag hubi in kuwa isticmaala noocyada saafiga ah ee Android, oo ay tabayaan shaashad aad u horumarsan, waxay ogaan doonaan sida loogu qiimeeyo cabirkooda.
Shaashad quful cusub iyo ogeysiisyo
Marka laga reebo kuwan kale maxaa ku cusub Android 12 sida ciyaarta ciyaarta iyo inbadan, waxaan bilaabi karnaa tirinta interface cusub Had iyo jeer on Display, screen qufulka, iyo ogeysiisyada. Marka waxaan dhihi karnaa in Google qorsheynayo inuu muuqaal cusub siiyo naqshadeynta Android.
In shaashadda qufulka ayaa lagu arkay horudhaca horumariye ee Android 12 saacad dijitaal ah xagga hore, oo lagu daray saacadaha ka badan daqiiqadaha, iyo far-weyne ballaadhan, oo aad ugu dhow. Fidiyaha "Jaleeco" ee leh macluumaadka cimilada iyo inbadan ayaa loo dhaqaaqay dhanka bidix ee kore.
Gudiga ogeysiiska Google wuxuu ku tijaabinayaa asal madoow taas oo la socon doonta habka maalinta / habeenkii. Sida midabka waraaqda waraaqda waxay ku xirnaan doontaa midabka mawduuca oo aan u malaynayno inaan ku dalban karno Android 12 qayb ka mid ah "mawduuc".
Maxaa haa taas iftiimiyay jaleecada hore waa sida "qaro weyn" kaas oo hadda ah bar dhalaalka marka loo eego kan aan hadda haysanno. Sida laba faahfaahin oo yaryar, waxaan ka shaqeyn doonnaa socodsiinta ogeysiiska cusub iyo isdhexgalka ogeysiinta laba-bog.
Ugu dambayntii Android: hoos ugu tilmaam farriimaha shaashad kasta
Ku weyn farqiga muuqda ee ugubkan ee tilmaantaas hoos u socota taasi waxay noo ogolaaneysaa miiska ama guriga si aan u balaarino gudiga ogeysiinta si markaa tilmaam kale aan ugu tagno toobiyeyaasha, waa in Android 12 aan awoodno ku samee shaashad kasta.
Taasi waa, uma baahnid inaan aadno guriga si aan u sameyno, laakiin ku jira codsiyada ama goobaha guddi ogeysiis ah ayaa loo ballaadhin doonaa si loo helo farriimaha lagu sheekaysto, iyo inbadan
Waxaan helay tilmaam kale - hoos u xoqo ogeysiisyada. Waad ogtahay sida Pixel Launcher kuu ogolaanayo inaad hoos u dhigto shaashadda guriga si aad hoos ugu dhigto hooska ogeysiiska? Haa, tani taasi waa tan - laakiin barnaamij kasta. pic.twitter.com/VpmRESJkkM
War soo dhaweyn ah oo aan ogahay Waxaad ku arki kartaa tweet-ka oo aan xiriirinno si aad u aragto sidee u shaqeysaa. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la arko barnaamijyada codsigan loo isticmaali karo si aan loo carqaladeyn howlahooda caadiga ah.
3 astaamood oo cusub oo ah Android 12 oo ku daraya astaamo badan waxa la socda cusbooneysiintan oo arki kara iftiinka xagaaga sida caadada u ah sanad walba; Iyo haa, waxaan horeyba uguheynay qaar kamid ah astaamahaan cusub qaabab kale oo caado ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » 3 sheeko oo cusub oo ah Android 12 oo ah maalmihii ugu dambeeyay oo aadan tabi karin
Sida loo soo rogo sawirada Instagram, fiidiyowyada iyo Sheekooyinka leh Qoob Stories